About Us - Shandong ZhongPeng Special now Co., Ltd
Shandong ZhongPeng Special now Co., Ltd. (ZPC) dia orinasa matihanina nanao raharaham-famokarana, R & D sy ny varotra amin'ny avo-fampisehoana silisiôma carbide vokatra, RBSiC / SiSiC (Fihetsiky nampikambana Silicon Carbide).
Shandong ZhongPeng now manokana CO., LTD efa mipetraka eo amin'ny nividy tany. Ny orinasa manarona faritra iray metatra toradroa ny 60000 hita ao Weifang, Shandong, Sina. Manana fiaraha-miasa mahafinaritra miaraka amin'ny oniversite eo an-toerana mpampianatra izay manao ny fandalinana ny hafanana-mahatohitra mitambatra. ZhongPeng Company ihany koa ny fikarohana fototra ho an'ny oniversite eo an-toerana. Main marika dia ny 'ZPC'. Manana ny asa fikarohana sy ny fampandrosoana ekipa noho ny fanompoana mpanjifa.
Maherin'ny 10 taona 'famokarana traikefa, ny teknolojia ekipa afaka hanome ny sary 3D vokatry ny famolavolana ny nozzle sy ny dipoavatra fitsapana fanandramana. Ny vokatra manana ny teoria tsara rafitra izay mety antoka ny fifaninanana fampisehoana. Ny vokatra dia mitovy amin'ny vokatra toy izany koa avy any Alemaina sy Etazonia.